Imephu ye-XL, iimephu ezivela kwi-Excel-Geofumadas
NgoJanuwari, 2010 Geospatial - GIS, ezintsha
I-MapinXL isicelo esakhiwe yi-ARTIC, ejoliswe kwiofisi yabantu, abangenalo iingcali kwi-GIS kodwa bafuna ukuphawula ngamaphupha ambala.
Sichitha ubomi bethu befuna ukudibanisa iimephu zethu ukuya kwi-Excel, uyazi ukuba abanye abanakho ukuhlala kude nezisombululo zeMicrosoft; Kwaye oku senze iwaka leendlela zokusombulula, ukungenisa idatha, ukuguqula iifomathi, ukwenza unxibelelwano lwedatha, ukupapasha iinkonzo, njl. Mhlawumbi ngenxa yesi sizathu, isisombululo siza kubonakala ngathi sisemgangathweni ekusebenzeni kwayo, kodwa umsi wolu loyilo usekwe kuguquko lwe-GIS (iimephu ezivela kwi-Excel), kwaye koku kukho umbono omkhulu.
Uqondiswe kwiingcali ezingekho kwiingcali zeGIS
Amashishini amaninzi aphumelelayo aqala ngawo izisombululo ezilulaNgenxa yoko, abo baqulunqa ezi zixhobo bafika entloko yomphathi ozibuza yona imibuzo efana nale:
Kutheni ndimele ndibuze ingcali ye-GIS imephu rhoqo?
Kutheni uhlala uyithumela kum?
Kutheni impazamo yombala ayizange ilahleke?
Kutheni ke kwandiqinisekisa ukutyala uphuhliso amawaka amaninzi GIS yaye njalo ukuthi uthumele kum imeyili ku jpg ... kwaye inobunzima megs ezininzi kangangokuba akazange iza?
Idizayini yenkampani yeWebinXL iyathetha ngokwayo, yenziwa ngokuthengisa abantu ngokwabo.
Into kakhulu ubenomtsalane kwesi sicelo, nto leyo esekelezelwe njenge tab omtsha iRibhoni ka-Excel, oku ibonakala kakhulu ngeli xesha sonke ndikuqhelile kule meko.
Izinto eyenza MapinXL kuba abasebenzisi abafuna ukwenza iimephu ipeyintwe umboniswana, Nokubuyiselwa liphulo ukuba ngaphambili Excel, kodwa eli xesha uyakwazi ukudala iimeko ezintsha, hlela iitafile, ezinxulumene kunye nezinye iitheyibhile, theming ngokweempawu ekugcineni ziba imifanekiso emibalabala.
Isithintelo esikhulu senza iimephu ezintsha, kuba zisebenzisa ifomathi engaqhelekanga ebizwa ngokuba yi-vxf, eya kuthi yona yazi kuphela ukuba iyivelisa njani. Ezinye iimephu zamazwe kunye nezahlulo zangaphakathi zinokukhutshelwa simahla, ukuba umntu ufuna imephu entsha, angayenza, nangona bengachazi phantsi kwaziphi iimeko okanye amaxabiso.
Ixabiso li-$ 99 ngelayisensi, enokuthengwa nge-Paypal. Akulunganga kwiinkampani ezinokuzisebenzisa kwindawo yokuthengisa, kunye nemiba enje:
Imephu yabathengi okanye ababoneleli
Iingxelo kubarhweli kunye namaqabane
Kumlawuli ophetheyo, ochithe ngaphezulu kwe- $ 700 kumboniso wedatha, i-1,500 yeedola kwilaptop, ohambe iikhilomitha ezingama-200 ukweyisela abatyali zimali ukuba izigidi zakhe zivelisa ... yongeza iimephu ezipeyintiweyo kwiingxelo zakho. Izisombululo ezinje kunye Touche Ziyona nto iyona nto ndiyibonayo ngenxa ye-geomarketing.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Iindwendwe zakho kwimephu yeGoogle
Post Next I-ArcMap: Ngenisa idatha ukusuka kwi-Microstation GeographicsOkulandelayo »